Mandrosoa miverina mamily
HEGERLS manosika hiverina hikorontana
Izy io dia misy singa mifototra amin'ny firafitra toy ny kamio palety. Manana ny mampiavaka azy ny kamio palety. Ny entana dia voafaritra amin'ny faran'ny talantalana ary manaraka ny lamina mandroso. Ny forklift dia tsy mila mifindra amin'ny lalantsara.
◆ tehirizo ny fotoana fakana anao.
◆ Tsy mila lalantsara firy, ampiasao tsara ny habaka.
◆ Tsara ho an'ny efitrano fitahirizana mangatsiaka izany.
◆ Mety amin'ny sokajy kely kokoa, habe betsaka.
HEGERLS adidy mavesatra manosika lamosina 2021 avo lenta 1500kgs isaky ny paleta manana paleta 5 lalina
1.Product fampidirana ny back back rack
mahitsy Taratra fanohanana Lalam-by Mpiaro marina Sakan'ny sisiny
* 50 tafo H300 / H500 D76 * 2.5
3.1 Fanohanana famaritana andry
4.Production antsipirihany momba ny famerenanao
4.1hafao ny fotoana fakana.
4.2Tsy mila lalantsara loatra izany, ampiasao tsara ny habaka.
4.3Mety ho an'ny efitrano fitahirizana mangatsiaka izy io.
4.4It dia mety amin'ny sokajy kely kokoa, habetsaky ny be.
Teo aloha: Fandefasana finday HEGERLS
Manaraka: Talantalana HEGERLS talantalana
Fantson'ny fikorianan'ny carton
Atosika ny fitoeran'entana
Rafitra fitehirizam-bokatra fitehirizana trano avo lenta